Author: Fenrirg Akinojinn
Nambarada qodobada hoose waxay la socodaan numbarada qodobada baarlamentaariga.
Murankii ka dhashay moowqifka dowladda federaalka ay ka qaadatay khilaafka dowladaha khaliijka iyo kan ay ka qaateen dowlad goboleedyada Soomaaliya ayaa cirka isku soomaalya shareeraya, markastana waxaa kasoo kordhaya wax cusub oo arrimaha sii murjinaya. Kadib markii lasoo xulay Xubnaha Baarlamaanka Ayeey waxay doorteen Gudoomiyaha Baarlamaanka ama Afhayeen, waxay markale duurteen Madaxweyne oo isgana sii xushay Raiisul wasaare, Sidaas ay dawladdu ku tahay Baarlamaani oo wax walba Baarlamaanka ayaa soo go’aaminaya.
Muxuu Khilaafka Khaliijka u gilgiley nidaamka federaalka Soomaaliya? Xaaf markii uu garoonka Cadaado kasoo dagayay waxaa loosoo dhaweeyay si aanan horay loo arag, waxaana hareertiisa ka muuqday guddoomiye ku xigeenka baarlamaanka Galmudug oo ahaa ninkii shir guddoomiyay kullankii baarlamaanka ee xilka looga qaaday madaxweynihii hore Cabdikariim Xuseen Guuleed. Soomaaliya Waxay leedahay laba xarun ee warfaafineed ee ku hadla Afka Dawladda Radio Muqdisho ito Telefishinka Qaranka Soomaaliyeedwaxaa kaloo jira Saxaafad madax badaan oo badankood ku hadla Afka Beelahood.
Federal Government of Somalia waa dawlad ay caalamku aqoonsanyihiin Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Soomaaliya Waxay kamid tahay Dalalka ugu Faqrisan aduunka, Ma jiro Fayo-dhawr guud oo kafaala qaadaya caafimaadka asaasiga ah ee Muwaadinka Soomaaliyeed.
Mid ka mid ah waa Somaliland oo gooni isu taagtay sheegatayna in ay tahay jamhuuriyad madax bannaan.
Fikradani waxay kaga timid dastuurka markii ugu horeysay Xeerkii Kumeel Gaarka ahaa ee la qoray sanadkii Waxa uu ku daastuurka in uu Kismaayo ku fidinayo gogol la’isugu keenayo madaxda dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada si loo turxaan bixiyo madmadoowga soo baxay.
Cutubka 4aad Waajibaadka Jamhuuriga ah. Cutubka 13aad – Hay’adaha Dowlad-Goboleedyada. Dastuyrka Soomaaliya waxay ahaayeen ciidanka ugu xoogan qaarada afrika Afrikada Madoowmarka laga eego Baaxadiisa iyo lacagta ku bixi jirtay iyo qalabka uu watay. Qodobadaan waa kuwa ka mid ah Tixda: Qodobka 97aad-Soo Magacaabida Musharraxa.
Haddii musharraxa uu soo jeediyo xisbi, magacaabistiisu waa in ay taageeraan ugu yaraan hal laan oo ka mid laamaha xisbiga ee ku yaalla dawlad-goboleed kasta. Cutubka kusaabsan dastuurada dowlad goboleedyada Cutubka 13 ee Dastuurka Qabyada ah wuxuu sharaxayaa in dowlad goboleedyadu ay sameeyaan soomaaliua ay ayagu leeyihiin oo waafaqsan Dastuurka Federaalka iyo mabaadiida aasaasida.
Hadaba, halkuu soomalaiya dhammaan doonaa khilaafka soo kala dhex galay sookaaliya goboleedyada iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya? Qoraalka mooshinka ayaa lagu soo gabogabeeyay jumladdan “Mudane Guddoomiye iyo xildhibaanada sharafta leh, wax badan ayaan u dulqaadanay meel-ka dhacyada iyo gabood-falada dadka iyo dawladnimada Soomaaliyeed ay ku hayaan dawladaha shisheeyuhu, ayadoo maantay ay na hortaallo fursad aan wax uga qaban karno, waajibaadkeena qaran aan ku gudan karno, Alle iyo umadda hortooda”.
Mooshinka xildhibaanada ayaa ka dambeeyay kadib markii qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka ay sheegeen in dowladda ay qaadato go’aan ay ku taageereyso isbeheysiga Sucuudiga ee go’doominta ku haya dalka Qadar. Maxkamadda Sare oo ku taal Muqdisho Gudoomiyaheedana waxaa soo doordta Madaxweynaha.
Qodobka 99aad-Madaxweyne-Ku-Xigeenka Musharraxiinta jagada madaxweynuhu waaa in ay soo magacaabaan qofka ay u xusheen jagada madaxweyne ku-xigeenka kaasoo noqonaya madaxweyne ku-xigeen haddii uu guuleysto musharraxa soo magacaabay, haynayana xilka madaxweyne-ku-xigeenka mudada uu madaxweynuhu hayo xilka madaxweynaha. Ciidanka soomaaliya waxaa la sameeyay kii, waa markii ay soomalaiya xornimadeeda ka qaadatay gumeeysta-yaashii Ingriiska iyo Talyaaniga.
Madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo shalay ka hadlay magaalada Kismaayo ayaa nasiib darro ku tilmaamay isqabqabsiga dalka ka jira. Maqal Xal ma laga gaari doonaa khilaafka waddamada Khaliijka? Qalabka shaqada Maxaa meeshaan la xiriiro Isbedelada la’xiriira Soo geli file bogagga khaaska ah Linkiga daaimka ah Macluumad ku saabsan Qaybta caddeynaha Boggaan soo xigo.
Inta uusan hawsha bilaabin Madaxweynaha Jamahuuriyaddu wuxuu marayaa dhaarta ku xusan sharciga, waxaana lagu hor dhaarinayaa xaflad ka dhacaysa fagaare dadweynuhu joogaanwaxaana dhaarinaya Guddoomiyaha Maxkamaada Dastuuriga. Dawladda Wali mayeelan Dastuur dadku ansixiyeen kaas oo ka turjumaya Soomaaliya oo dhan waloow uu jiro mid kumeel gaar ah oo lagu magacaabo Dastuurka federaalka ku-meel-gaara ah Dastuurka iyo Federaalaynta.
Qaybaha kale Xisbiyada siyaasadda Xiriirka Dibadda Baasaboor. Golaha Wasiirrada marka ay helaan kalsoonida Golaha Shacbiga waxay marayaan dhaarta ku xusan sharciga, waxaana ku hor dhaarinaya fadhi gaar ah ee Golaha Shacbiga Gudoomiyaha Maxkamada Dastuuriga. Dalalka kale Adlas Siyaasadda portal. Qoraalka gudaha oo kooban. Khilaafka Khaliijka iyo siduu u kala qaybiyay Soomaaliya.
In other projects Wikimedia Commons. Madaxweyne Axmed Madoobe wuxuu ka mid yahay labada hogaamiye ee aan ka hadlin moowqifkooda ku aadan khilaafka Khaliijka iyo go’aanka dhowladda dhexe.
Cutubka 7aad Qaab-Dhismeedka Federaalka dasuturka Jamhuuriyadda. Maamul goboleedka Galmudug ayaa noqday midka saamaynta ugu xun uu murankan ku yeeshay kadib markii madaxdii sarsare ee maamulkaasi ay ku kala qaybsameen moowqifka khaliijka.
Fedderaalka xusid mudan in mooshinka ay hormuud ka yihiin xildhibaano horey dowladda ugu eedeeyey in ay Itoobiya ku wareejisay muwaadin Soomaaliyeed, arrintaas oo markii dambe loo saaray guddi soo baara.
Markii hore arrinta waxa ay ku ekeyd kala aragti duwanaan oo kaliya, balse hadda waxa ay u egtahay in uu u tilaabay khilaaf rasmi ah oo ragaadinaya laamaha dowladeed ee Soomaaliya oo markii hore ku jiray xaalad dib usoo kabasho. Waxaa laga keenay ” https: